Ruzivo rwekutanga rwemachira》
Chitsauko chekutanga ruzivo rwekutanga rwejira
1 yadhi (Y) = 0.9144 M (M) 1 inch (1 “) = 2.54 CM (CM) 1 yadhi = 36 inches 1 pondo (LB) = 454 g (g) 1 ounce = (OZ) = 28.3 g (g) )
Ii. Tsanangudzo yemachira magadzirirwo:
Nhamba yaDenny: inoreva kuwanda kweiyo shinda refu yefaera, kureva hurefu hwemamita 9000 ehuremu, huremu hwayo i1 gramu (g), inowanzo tsanangurwa sa1 Dan, inomiririrwa nemavara echiRungu "D". Semuenzaniso, 9,000m yakareba shinda, inorema 70 gramu, inotsanangurwa se70 Dan. Inonyanya kushandiswa kumiririra makemikari fiber ukobvu.
2. Huwandu hwezvimedu uye kuwanda kweiyo warp uye weft: inomiririra kuwanda kwemachira, kureva huwandu hwemitsetse yewakarukwa uye weft pa square square, inomiririrwa neChirungu tsamba "T". Teerera kune iyo nhamba yenhamba yekuongororwa kwemachira nzira yekucheka, tsvaga iwo unoenderana mutemo wekuruka, kuitira kunyatso kuyera huwandu hweiyo nhamba yenhamba.
3. Nhamba F: shinda yega yega kana wefa yakasanganiswa nemafuta akati wandei. Nhamba F inomiririra huwandu hwefilamenti mumucheka wakarukwa kana weft, uyo unomiririrwa neChirungu tsamba "F". Ukuwo, iyo yakatetepa ruoko, iyo yakaoma.
4, iyo hukobvu hweshinda yakakosha: kazhinji, kushandiswa kwe "shinda", kureva kuti, pondo yedonje yekukochekera kureba kwemayadhi mazana masere nemakumi mana, shinda iyi inonzi shinda, ine mavara echiChirungu "s", akadai se21 shinda ine makumi maviri neshanu. (mushure mekutendeuka: 21S = 250D)
5. Mucheka kutaurwa anomiririra:
Warp ukobvu / F × weft ukobvu / F
Nhamba yeshinda yakarukwa + nhamba yewaya yefa
× 60 "inogona zvakare kupfupikiswa ku70D × 190T × 60"
Kupatsanura nemasikirwo (kuenzanisa kwakadai kunotevera)
Fibers inogona kuganhurwa kuita echisikisi tambo uye synthetic tambo nemaitiro avo. Natural fibers dzinosanganisira sirika donje, furakisi, shinda, nezvimwewo, nepo zvigadzirwa zvekugadzira zvinosanganisira nylon, polyester, acetate, nezvimwe.
A. Nylon b. Nylon c. Nylon d. Nylon Nylon yakakamurwa kuita "nylon 6" uye "nylon 66 ″. "Nylon 66" zvakasiyana siyana zvemuviri zviri nani pane "nylon 6 ″, mutengo unodhura. Mumamiriro ezvinhu akajairika, nemoto kuburitsa hutsi chena, hwema rudzi rwemasitadhi kuravira. Inowanzo kuvezwa neidhi asidi.
B, Polyester: Chirungu "Polyester", inowanzo rondedzerwa sa "T". Pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, nehutsi hwemoto (asiwo teerera, mushure megiyoni glue nekuda kwechikonzero, kutsva zvakare kuve hutema hutema, saka teerera kusiyanisa), kutsva nekukurumidza, kunhuwa munhuwi unonhuwirira. Paradzira madhayi anowanzo shandiswa kudhaya. Kuchenjerera kunofanirwa kubhadharwa kune iyo shanduko yemavara uye sublimation kutsanya.
C. donje d. Kotoni Mumamiriro ezvinhu akajairika, nemoto, kupisa nekumhanya kunononoka, murazvo unoita yero, donje rinopisa kuravira kwatinonyatsoziva. Natural madota madota machena. Madota eRayon kazhinji ari matema, asi ese anonaka zvakafanana. Kazhinji akadhayiwa neakashanda kana akananga madhayi.
D) dzakarukwa mhando dzakadai: polyamide / polyester zvakarukwa (N / T), polyamide zvakarukwa (T / N), polyamide zvakarukwa (N / C), polyamide zvakarukwa (C / N), polyester / donje zvakarukwa (T / C) , donje-polyester zvakarukwa (C / T) uye mamwe faibha dzakarukwa mhando. Semuenzaniso, "N / C" inomirira "warp ndiyo nylon, weft ikotoni", "C / N" inomirira "warp ikotoni, weft ndiyo nylon". Zvichingoenda zvakadaro.
E, kune zvakare acetate fiber, shinda, hemp silika uye imwe tambo, kune zvakare kusanganiswa, kune Tencel fiber (yeChirungu Tencel, ine mashizha sezvinhu zvakasvibirira viscose fiber).
Kurongwa maererano nenzira dzekuruka.
Zvinoenderana nenzira yekuruka, iyo yakakamurwa kuita yakarukwa jira, rakarukwa jira uye isina-yakarukwa machira, ayo anogona kuenderera akapatsanurwa seinotevera:
A. kuruka: pane kazhinji kutenderera kuruka uye kuruka kuruka
B. Jira rakarukwa: jira rakagadzirwa neshinda dzakarukwa uye shinda dzesimbi. Zvinoenderana nenzira dzakasiyana dzekukamura warp uye weft, inogona kukamurwa kuita Taffeta, Twill, Sattin naDobby, nezvimwe (cherekedza: pachena kuruka, Twill uye satin kuruka ndiwo "maturu matatu ekutanga" ekuruka machira), uye pa nguva imwecheteyo, ivo vachasanganiswa pane yakarukwa kana weft kuti vagadzire akasiyana maitiro. Muchidimbu, kune akawanda marudzi eshanduko, ayo anoda kuverengerwa uye kuona mune anoshanda basa.
C. Isiri-yakarukwa jira: inogadzirwa nekunamatira kwakananga uye kumanikidza kweshinda pasina kurukwa.
3. Inogona kukamurwa kuita:
A, FDY, DTY, ATY. FDY dzakarukwa zvigadzirwa ndeyenylon, polyester, FDY Oxford machira; Zvigadzirwa zvakarukwa zveDTY zvinosanganisira shinda dzemuchirimo, furizi dzepichisi, machira eOxford akadzika, nezvimwewo ATY inonyanya kushandiswa kuruka maturu. Kune mamwe zvakare masitayera akasanganiswa kubva pamusoro kuti agadzire akasiyana mhedzisiro.
B, hafu mwenje, kutsakatika uye kupenya. Semi-mwenje ndechimwe chigadzirwa chechisikigo, kana pasina kurapwa kwakakosha, iyo fiber inowanzo kuve semi-mwenje; Kutsakatika kweiyo fiber kugadzirwa maitiro ekuwedzera chigadzirwa che titanium oxide, kuitira kuti jira rigone kuve padhuze nemhedzisiro yeakasikwa fiber, yakawedzera kunaka runako; Flash ndiko kunzwa kwechiedza kunoratidzira kubva pamicheka panguva yekugadzirwa kwefiber nekuita kuti zvikamu zvadzo zviite mativi matatu kana nekutsetseka pamusoro peiyo tambo.
4. Kazhinji machira emarudzi:
1, Taffeta: nylon Taffeta gobvu, polyester Taffeta, polypolyester yakavhenganiswa Taffeta, zvakajairika mamiriro: iyo furu yakanaka, jira pamusoro mwenje uye rakatsetseka, riine mutete, senge: nylon 70D × 190T, 210T, 230T; Zvinhu zvenaironi 40D × 290T, 300T, 310T; Polyester 75D * 190T, 68D * 190T; Polyamide polyester rakarukwa 40D × 50D × 290T, etc.Iyo inowanzo gadzirwa neFDY shinda.
2. Oxford: nylon Oxford, polyester Oxford uye tasilong Oxford. Kazhinji kutaura, shinda yacho iri mukobvu ine simba rakanaka uye jira gobvu, senge nylon 210D, 420D uye 840D (iri yekirasi yeFDY). Polyester 150D, 300D, 600D, 1200D (ndeveDTY kirasi); Polyester 210D, 420D (FDY kirasi); Taslon 200D × 300D, 400D × 500D (iri yekirasi yeATY), nezvimwe.
3. Taslon: nylon Taslon, polyester Taslon uye Oxford Taslon. Mamiriro ezvinhu akajairika: shinda yeweft iri mukobvu, jira pamusoro riri rakaomarara, uye rine kunzwa kwehupfumi uye kunzwa kwekutenderera donje. Zvakadai se: nylon taslon
VaZheng (306949978) 10:23:21
70D * 160D * 178T, 184T, 228T, taslon 320D, 640D, taslon Oxford 200D * 300D, 400D * 500D, nezvimwe.
4. Chitubu subtextile (Pongee): kazhinji ndeye polyester DTY yarn ine rough jira pamusoro (kunze kwe50D) uye yakapfava ruoko inzwe, senge: polyester chitubu subtextile 75D * 190T, 210T, 240T, 50D * 280T, 290T, 300T, nezvimwe. .
5. Trilobal: nylon taffeta, polyester taffeta, poly-polyester inopindirana mheni, ndiko kuti, shinda dzakarukwa semachira anopenya, senge: ni flash 70D * 190T, 210T, polyester flash twill, nezvimwewo, iine imwechete flash uye mbiri flash ( kupatsanura warp kana weft se flash silk inonzi single flash, uye warp uye weft se flash silk inonzi double flash).
6, Twill (Twill): jira pamusoro pezviyo zveTwill, Twill jira kazhinji hombe kuwanda kweiyo warp uye weft. Senge: nylon twill 70D * 210 * 230T, 272T, 290T, polyester twill 75D * 75D * 230T, 260T, uye yakavhenganiswa twill.
7.Kucheka: senge brocade / polyester kurukwa (N / T), brocade / donje kuruka (N / C), polyester-donje kuruka (T / C), etc. Iyo nylon uye polyester inogona kuve FDY, DTY kana ATY, semi-inopenya, matte kana kupenya. Pakati pavo, shinda yekotoni yakakamurwa kuita muzinga wakawanda, semi-combed, combed, ichine imwe yemishenjere.
8. Peach ganda (Microfiber): inozivikanwawo seMicrofiber. Zvakadai se polyester peach dehwe 43022 (75D * 240T), 43099 (75D * 150D * 220T), 43377 (twill, 75D * 150D * 230T), nezvimwe.
9. Satin uye satin.
10. Pamusoro pezvo, pane mataresi (Ripstop), jacquard (Dobby), nezvimwe zvakaumbwa neshanduko yemhando dzemachira dziri pamusoro.
V. kuyedzwa kwejira jira.
Mubasa rinofanira kugara richiteerera kururamisa kweiyo jekiseni kuongorora, kana iko kukanganisa kuchakonzera kurasikirwa kusingatarisike, saka inofanirwa kutarisisa zvakanyanya kuongorora kwejira jekiseni kuongororwa uye kusarura, uye teerera kunonoka kwezviitiko mubasa. , iva nechokwadi chekuwana kuongorora kwakarurama.
1. Zvivakwa zvejira: nylon, polyester, donje, N / C, T / C, nezvimwe.
2. Shinda zvivakwa: FDY, DTY, ATY, nezvimwe.
3. Maitiro (maitiro echitarisiko): weave yakajeka, twill, cheki, satin weave, Dobby, nezvimwe
A. plain weave: single warp uye imwechete weft, yakapetwa kaviri uye yakapetwa kaviri, yakapetwa kaviri uye imwechete warp uye yakapetwa kaviri (yakapetwa kaviri), nezvimwe.
B. twill: 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, nezvimwe.
C, lattice: kune yakavanzika lattice, inoyerera lattice (mitsara miviri ichiyangarara, mitsara mitatu ichiyangarara), uye zvakare tarisa kune saizi yetepisi, iyo nhamba yematanho uye emahara mitsara mugridhi nenzvimbo inoyerera yekucheka yetsetse grid mutsara .
D. ye satin, ingani (kana weft) iyo warp (kana weft) inoyerera pamusoro uye ingani weft (kana weft) iyo warp (kana weft) inonyura pamusoro?
E, Dobby dzakasiyana, zvakanyanya kutarisa kuongororwa kwemutemo wekuruka machira.
F. teerera kune mamwe masitaera uye maficha.
Denny kuverenga kana kupeta kuverenga: warp, weft uye inoenderana F kuverenga.
5, warp uye weft density: ive shuwa kuti unzwisise mutemo wejira rekuruka, nhamba yenhamba uye kuverenga kuve kwakarurama.
6. Semi-mwenje, kutsakatika kana kupenya.
7. Upamhi hwejira (teerera hupamhi mukati kana kunze kwepini, uye zvakare cherekedza hupamhi hunobudirira hwechigadzirwa chakapedzwa mushure mekuisa glue kana kumwe kugadzirisa).
Vi. Yakajairika kugovaniswa kwembeu (Appendikisi)
Chitsauko ii ruzivo rwekutanga rwekudhaya uye kupedzisa machira
I. basic kugadzira maitiro
Kuongorora kwembryo uye kuda kudhaya uye kuomesa kwejira rakasonerwa, "kupedza uye kugadzirisa mushure mekuongorora (kusanganisira kuumba, kunama, kudzikamisa, kusimbisa, kutsika, kunamatira PVC, PU dehwe, kuumbiridza, kudirana, nezvimwewo)
Ii. Nhanganyaya kune yega yega maitiro uye kutonga kutarisa:
1. Kuongorora kwemwana mudumbu uye kusona mucheka we "embryo":
A. ndiko kuti, jira rimwe remu "embryo" rakasonwa rikaitwa hombe roll kana Bhokisi remota, inonzi A humburumbira, huwandu hweA humburumbira hunosiyana zvichienderana nekugadziriswa kwembatya.
Kuongororwa kwembryo kunonyanya kudzora mhando yemucheka wembereko kuti uone kana paine zvisakanaka sekukweva, weft faira, rakafa danga, yero gwapa, chakuvhe nzvimbo, nezvimwewo Panguva imwecheteyo, kucherechedzwa kunofanirwa kubhadharwa kuti uone kana jira rinoenderana nezvinodiwa. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, panodiwa nhamba yebatch.
A. Kuti ruchengetedze mutsetse kubva pakumonyoroka panguva yekuruka, shinda yakamiswa nyota, saka inofanira kukosheswa usati wadhaya kuti icherechedzwe.
B. Kana iyo desizing isina kuchena, pachave nemavara mavara, pulp mavara uye zvimwe zvakakanganisika mushure mekudhaya.
Kazhinji, mushure mekuda, jira rinofanira kusuka uye kucheneswa, zvikasadaro jira rine huwandu hwePH hunoshatiswa zvakashata uye zvimwe zvisina kujairika zvichaitika.
Pane nzira mbiri dzekuda kuziva: mu-humburumbira uchishuvira uye nemota refu uchida. Kazhinji, iyo yekutanga ine zvirinani desizing mhedzisiro, asi yakaderera kushanda.
(1) kemikari fiber kudhaya:
Tembiricha yakajairwa: kazhinji pazasi pe100 ℃, inonyanya kushandiswa kudhaya semi-apedza nylon taffeta, nylon Oxford, nylon twill, nezvimwe. Iyi nzira iri nyore kugadzira musoro uye muswe chromatic aberration, kuruboshwe, pakati nepakarurama chromatic aberration, crease uye zvimwe zvisina kujairika.
B. High tembiricha mupumburu värjäys: tembiricha iri kazhinji anenge 130 ℃, ainyanya kushandiswa värjäys polyester taffeta, N66, zvinhu zvenaironi vachimenya jira, polyester Oxford (filament), etc. Iyi nzira iri nyore kubereka musoro uye muswe ruvara musiyano, kuruboshwe, yepakati uye kurudyi musiyano wemavara, crease, poindi yemavara uye zvimwe zvisizvo.
C. Kufashukira kudhaya: iyo tembiricha ingangoita 100 ℃ kusvika 130 ℃, inonyanyoshandiswa kudhaya zvigadzirwa zvepolyester senge machira echirimo, peach ganda velvet, polyester Oxford, tullon, polypolyester interweave, nezvimwewo Polyester machira anogona zvakare kuvezwa nekufashukira. Zvichakadaro, nylon nezvimwe zvigadzirwa zvine makwinya zvinoshandiswawo nenzira iyi. Iyi nzira iri nyore kuburitsa maruva eruvara, huku huku tsoka, mamaki akatwasuka uye akapetwa. D. warp axis kudhaya: yakakodzera mhando dzese dzemachira, asi dzinofanirwa kushandiswa zvine mutsindo zvichienderana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro. Iyo yekudhaya tembiricha inogona kudzorwa kubva ku100 ℃ kusvika kune anopfuura 130 ℃, iri nyore kuburitsa anomalies akadaro semipendero isina kudzika uye akasiyana masosi.
(2) kudhaya nzira dzeimwe micheka:
A. Cotton kudhaya: kazhinji kureba mota kudhaya (hukuru hwakawanda hunodiwa), kupeta kudhaya (hukuru hwakawanda kana hushoma hunotenderwa), kufashukira kudhaya (yepakati kana diki yakawanda inobvumidzwa). Reactive dyes (ine kutsanya kwakanaka), yakananga madhayi (nehurombo kutsanya) uye ekudzora dhayi (ine yakanyanya kutsanya) anowanikwa.
B, N / C, C / N kudhaya: kufashukira kudhaya kunowanzo gamuchirwa. Kotoni inotanga kudhayirwa uyezve nylon yakadhayiwa. Reactive madhayi anoshandiswa kudhaya donje uye acid madhayi (nekukurumidza kutsanya) anoshandiswa kudhaya nylon. Uyezve shandisa yakananga dhayi kudhayi (murombo kutsanya).
C, T / C, C / T kudhaya: kufashukira kudhaya kunowanzo gamuchirwa, polyester yakadhayiwa kutanga kozoti donje yakavezwa, polyester yakavezwa nekuparadzira dhayi, donje yakavezwa neyekuita dhayi (kutsanya kwakanaka). Kune zvakare yakareba mota yekudhaya, kudhaya, uchishandisa yakananga madhayi (murombo kutsanya).
(3) dhayi kupatsanura:
A, acid madhayi: anoshandiswa kudhaya micheka yenylon, kazhinji kune yakasimba solid kuvandudza kukasira kwemavara, asi zvakare kutarisisa kusarudzwa kwemasanganiswa edhayi uye kushandiswa kweAnonzwisisika dhizaini maitiro. Kugadzirisa mumiririri kunosarudzwa zvisizvo kana muyero wakanyanya kukwirira kunogona kukonzera kunetseka.
B. Paradzira madhayi: anoshandiswa kudhaya micheka yepolyester. Kazhinji, kuwacha VAT kunofanirwa kushandiswa kusimudzira kutsanya kwemavara. Paradzira madhayi kubhadhara zvakanyanya kutamisirwa uye sublimation kukurumidza.
C, madhayi anoshanda uye akanangana nedhayi: ndeya tembiricha yakaderera tembiricha.
4. Kuomesa kazhinji yakakamurwa kuita roller kuomesa uye isiri yekutaurisa kuomesa)
A, hapana kuomeswa kwekubata hapana wekubatanidza kuomesa uye yekuumba muchina, hapana hukama pakati pejira uye hita, kuvimba nemhepo inopisa inopfekedza pamucheka kuti uwane chinangwa chekuomesa. Inonyanya kushandiswa kuomesa mafashama akavezwa zvigadzirwa kuchengetedza jira fluffy uye akapfuma anzwe. Mutengo wakakwirira kupfuura roller kuomesa. B. Drum kuomesa: jira rakanangana rakanangana nedhiramu, uye chinangwa chekuomesa jira chinoitwa nekupisa dhiramu. Ainyanya kushandiswa rwakapetwa värjäys uye yakarukwa danda värjäys zvigadzirwa (akadai zvinhu zvenaironi sirika, polyester, zvinhu zvenaironi Oxford, polyester filament Oxford, etc.), shongwe sirika refu kirasi kunogona kuvawo kutanga dhiramu Dryer (asi anogona chete kuva wekutanga kuomesa matanhatu, manomwe akaoma kuti asakonzere ruoko rwakaoma), wozoenda kumuchina kunogadzira mvura kugadzirisa mvura. Lower kuomesa mutengo.
A. Iyo yepakati yekutarisa ichaedza akasiyana mavara kukasira kwejira uye kutarisisa kune mhando yejira repamusoro, senge crease, kara musiyano (kara musiyano, humburumbira musiyano, pitfall mutsauko), ruvara pateni, ruvara gwapa, tsvina, girisi , kudhirowa, shinda faira, tambo yakasungwa, nezvimwewo B. Chengetedza zvigadzirwa zvisina kukwana kubva muchikamu chezasi kudzivirira kuwedzera kwemitengo. Mushure mekupedza nekugadzirisa machira, zvimwe zvigadzirwa zvisina kujairika hazvigadziriswe kana kunetsekana kugadziriswa. C. jira rinogadziriswazve uye rakasonwa risati rapinda muchikamu chinotevera.
A. Mushure mekupedzwa, izvo zvemuviri nemakemikari eiyo jira haina kugadzikana. Semuenzaniso, shrinkage, upamhi, warp uye weft density hazvisi nyore kuchinja. Panguva imwecheteyo, mukupedzisa dhizaini ino chikamu ichi chingagone kuita mashoma mashandiro ekugadzirisa, kunge semvura yemvura (isina mvura), kupfava, pane resin, murazvo wemoto, antistatic, supersplash mvura (teflon kurapwa), inotora hunyoro kuburitsa ziya , kurwisa hutachiona kudzivirira hwema kuti umirire kwekanguva. B. Nekuda kwetembiricha yakakwira yekumisikidza, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune iyo shanduko inoshanduka usati uye mushure mekumisikidza, kunyanya mamwe mavara akaomarara, senge grey, uto girini, mwenje khaki, nezvimwe. . C. kuumba kunogona kudzora hupamhi, warp uye weft density, shrinkage, nezvimwe, kunyanya kudzora kwekushomeka, izvo zvinokanganisa zvakananga mutengo wekugadzirisa, saka kutarisisa kwakakosha kunofanira kubhadharwa. (yedu yekambani odha shrinkage zvinodiwa inowanzo geza shrinkage ye3%, ichinyatso kugeza shrinkage ye2%). Huru zvinhu zvinokanganisa kuumba maitiro tembiricha, kumhanya uye kuwandisa. D.Kutangisa kune akati wandei maitiro ekugadzirisa:
(1) kupwanya mvura kupedzisa dhizaini yemucheka ine isina mvura uye isina guruva basa;
Nyoro kupedzisa dhizaini kunoita kuti jira rinzwe rakapfava uye rakatsetseka, asi teerera kuti jira rinotsvedza here. Mvura inopararira uye yakagadzika inogona kuitwa panguva imwe chete, ichiita kuti jira rive risina mvura uye rakapfava, asi nyoro rinokanganisa mvura inoputika.
(3) resin inopedzisa dhizaini inonyanyo shandiswa kumucheka weiyo yakasimba shinda uye rega inzwe kuomarara, imwe resin ine formaldehyde, inofanirwa kutarisisa kusarudzwa; Mwaya mvura uye nebwe yakatarwa zvinogona kuitwa panguva imwe chete, uye nebwe pfapfaidzo mumiririri ane kusimudzira kushanda.
Flame retardant kupedzisa dhizaini yemurazvo unodzora basa rejira rine basa rekubatsira, murazvo unodzora unogona kuitwawo panguva imwechete kupedzisa dhizaini yemvura, asi kunyatso tarisisa kusarudzwa kwemumiriri wemvura, zvikasadaro mhedzisiro remoto unodzora wakanyanya kukura.
Antistatic pedzisa dhizaini inoita kuti jira riite basa reantistatic, inogona kupedzisa dhizaini nemvura yekupfachura panguva imwe chete, asi ive nemhedzisiro yekupwanya mvura.
6 hunyoro hwekumwa uye ziya zvinopedzisa dhizaini kuitira kuti machira akurumidze kutora ziya, kupfeka mbatya dzemitambo kune pfungwa huru yekunyaradzwa. Iwe haugone kuzviita nemvura.
Antibacterial deodorant kugadzira inonyanya kubvumira machira ane antibacterial basa, anonyanya kushandiswa muzvivakwa zvekurapa.
Nhasi uno wedzera mvura yakatarwa (inonziwo kurapwa kwetefon): pane yakajairwa mvura yekumwaya yakagadzwa neisina mvura isingaite, isina guruva, asi zvakare nemafuta ekudzivirira basa. Kazhinji kutaura, muenzi anozokumbira iyo dupont tag.
7.Karendering uye kunama:
A, mhedzisiro yekutsiva inogadzirisa nyoro inonzwa kuti jira rinodzikisa pamusoro riite sandara, dzikamudza mukaha pakati pejira rejasi kudzivirira maitiro kana kuita kuti gundi ikwanise kuzadzikisa kumanikidza kwemvura kuita kuti gundi pamusoro riwedzere kutsetseka uye rakanaka kudzvanya pamusoro rine A inopenya kushanda. Izvo zvinhu zvitatu zvecalendering tembiricha, kumhanya uye kumanikidza. Calendering inoshandura ruvara rwejira. C. Glue inogona kuita kuti jira risave nemvura, rinopenya-proof, risina mhepo uye mamwe mabasa, pamwe neshinda yakasimba pamucheka, kuwedzera kutaridzika uye kunzwa, uye kuita kuti unzwe, zvichiita kuti jira rikoshe pakushandisa. D. acrylic (inozivikanwawo se AC, PA), PU yekunamatira, inofema uye inonamira inonamira, iyo inogona kugadziridzwa kuita inonamira, chena inonamira, sirivheri yekunamatira, ruvara rwekunamatira, pearl yekunamatira, uri yekunamatira uye zvichingodaro. Zvakare inogona kuwedzera inoenderana mbishi zvinhu mune iyo glue kuti iite anti-uv, murazvo unodzora, anti-yero uye mimwe mhedzisiro.
E. Teerera kudzora kumanikidzwa kwemvura, kunzwa (ukobvu, kupfava uye kuomarara), kuenzana kweglue, peel simba, kushomeka kwemvura (kuchena), kuchena, nezvimwewo Chenjerera pamusoro peiyo colloidal particles, zvisaririra, ingave yakaoma. Tarisiro inofanirwa kubhadharwa kune yekunamatira pamusoro pemvura yekumira tepi (PVC tambo / PU tambo).
8, PVC yekubatanidza: teerera kune hukobvu hwehukama, kunzwa, kusunga simba peel, mhando yeinamatira pamusoro.
9. Kumwe kugadzira: yakaoma PU (pepa rekuparadzanisa), rinoumbwa, PU dehwe, nezvimwe.
10. Kuwacha: rimwe jira rekotoni, N / C, T / C rinofanira kusuka. Kushambidza kwemvura kunogona kuganhurwa mukugezesa mvura kwese, kushambidza kwemvura nyoro uye enzyme yekugeza mvura (kubvisa bvudzi riri pamusoro pejira re donje).
11.Kuongorora kwekupedzisira: tarisa mhando yezvakapedzwa zvigadzirwa, giredhi iwo, kurongedza uye kuronga ivo kuti vatumirwe, uye kazhinji kugadzira marekodhi ekuongorora uye tafura inoenderana Chero matambudziko anofanirwa kuve anofambiswa nenguva kune mutengesi kuti ataure nemutengi.
Chitsauko iii kukoshesa pamucheka mhando
1, upamhi: kazhinji inoreva hupamhi hunoshanda, kureva, upamhi hwepini, kana mushure meglue inoshanda yakafara.
2, warp uye weft density: yakaoma zviyero inofanirwa kutarisisa kuyerwa kweiyo warp uye weft density.
3, weft vachikotama: general grid jira weft kukotamisa zvinodikanwa hazvifanirwe kuve zvakakura kupfuura 3%, pachena jira weft kukotama hakuzove kwakakura kupfuura 5%.
4. Shrinkage rate: iyo shrinkage chiyero cheakapedza zvigadzirwa mune meridional uye zonal mafambiro mushure mekugeza.
5. Water splashing degree: ISO inoyerwa nemadhigirii (50 degrees musiyano ~ 100 madigiro akanaka) kana neAATCC nhanho (1 mwero musiyano ~ 5 madigiro akanaka). AATCC level 3 yakaenzana neIO level 80 degrees.
6, kukasira kwemavara: ichi chiratidzo chakakosha kwazvo, chine kuwachira nekutsanya (ine fade mukusunga kwemavara, kukasira kwemavara), kusanyorova kwemvura (kuwana kupera, kushatiswa neruvara), zuva (rakadzima) kukasira kwemavara nekukwiza kukasira (tora fade, yakasvibiswa nemuvara), iko kukasira kudikitira (kuve kwakadzima, kushatiswa nemuvara), sublimation kutsanya, kudhaya kwepad, nezvimwewo, sekuyerwa nemusiyano wezinga (1 ~ 5).
7. Simba: tensile simba, kubvarura simba uye kuputika simba (kg / cm2).
8. Mvura yekumanikidza kuramba: kusimba kwemvura yekumanikidza (isina dhigirii isina mvura), senge 2000mm / H2O (mm mvura ikholamu), iyo yakakwira kukosha, zvirinani kushanda kwemvura.
9. Kupinda kwehunyoro: iyo unit ndeye g / M2 * Zuva, zvichiratidza hunhu hwemvura ichipfuura ne1 mita mita yemachira mumaawa makumi maviri nemana pane imwe tembiricha uye hunyoro.
10. Oiri inodururwa: bvunzo index ye teflon yekugadzirisa machira, yakakamurwa kuita mashanu mamakisi (1 giredhi musiyano ~ 5 mamaki akanaka).
11, kuwedzera kune iririmi retardant kuita, anti-static, anti-ultraviolet uye mamwe maitiro emuedzo, izvi zvinoda nyanzvi nyanzvi kuti ive nenzira yekuyedza, pano haina kutsanangurwa.